maguta nenyika Ruzivo runoshanda kumunhu wese.
Rudzi: maguta uye nyika
Iko Troy iri kupi? Guta reTroy riri muTurkey. Nekuda kwekuedza kwevanochera matongo, zvaive zvichikwanisika kumisikidza nzvimbo yeguta rekare reTroy - yaive pamahombekombe eGungwa reAegean, kuchamhembe kwakadziva kumadokero kweAsia Minor. On…
Vachatanga rini kuvaka mabhiriji muSt. Petersburg mu2015?
Mabhiriji achavhurwa riini muSt Petersburg muna 2015? Iyo purogiramu yemabhiriji emaawa muSt. Petersburg yatozivikanwa. Ehezve, shanduko dzazvino dzinogoneka mune ino purogiramu (haugone kufanotaura zvese), asi ...
Chii chinoratidzwa pajasi rezvombo zveParis?
Chii chinoratidzwa pane jasi remaoko eParis? Zvirokwazvo chikepe uye zvimwe zvakawanda. Iri jasi rezvombo rakawana chinzvimbo chepamutemo pasi pemutongi Charles wechishanu. Chitarisiko chayo chakachinja nekufamba kwenguva. Parizvino…
Pane kune magaya muChechnya, Ingushetia uye Dagestan here?
Kune ngochani muChechnya, Ingushetia uye Dagestan? )))))))) Mubvunzo unonakidza, ndinofunga kune mapurisa emigwagwa, vatevedzeri uye vatambi venhabvu kwese kwese))))) Chechnya, Ingushetia neDagestan, kana ndisina kukanganisa, idzi nyika dziri mu ...
Nderipi guta rePoland iro kufamba kweSolidarity kwakatangira?
Nderipi guta rePoland iro kufamba kweSolidarity kwakatangira? Polish trade union quot; Solidarityquot; yakatanga kuoneka muna 1970 pakati pevashandi vengarava veguta reGdansk. Mukati memakore mashoma, huwandu hwese hwevatori vechikamuquot; Solidarityquot; yakayerwa mumamirioni, zvivakwa zvacho zvaivapo ...
Inyika ipi iyo Elba inowanikwa?
Ndeipi nyika chitsuwa cheElba chiri? Elba Island iri mune imwe yenzvimbo dzeItari - Tuscany. Saizvozvo, ndeyenyika ino. Elba inozivikanwa zvakanyanya senzvimbo yekutapwa kwaNapoleon. Kuti ...
Maawa okuzarura eCentral Market muVeronezh? Nzira yekuwana sei kubva kuchiteshi chezvitima?
Kuvhura maawa eCentral Market muVoronezh? Ungasvika sei kubva kuchiteshi chechitima? Pakupedzisira, vanhu veguta nevarimi vakamirira kuvhurwa kweCentral Market nyowani muVoronezh. Yakakura, yakajeka, yakasununguka kune vese mutengi uye ...
Ndekupi Gaza (mapeji ezvematongerwo enyika kana mamwe mapepa)?
Iri kupi Gaza Strip iri (pane zvematongerwo enyika kana chero imwe mepu yenyika)? Iyo Gaza Strip iri pamhenderekedzo yeMediterranean kumaodzanyemba kweMediterranean mhenderekedzo yeIsrael padyo nemuganhu neEjipitori. Tsvaga Chikamu.
Ndeipi maguta eRussia akambotumidzwa zvakare?
Ndeapi maguta muRussia akambodaidzwa mazita? Ustinov-Izhevsk Kuibyshev-Samara Vyatka-Kirov Yekaterinburg-Sverdlovsk Andropov-Rybinsk Dzaudzhikau-Ordzhonikidze-Vladikavkaz Leningrad -St. Kumaguta akatumidzwa mazita pamusoro apa: Aleksandrovsk ...
Chii chaungaona muPoltsk? Ndokupi kwaungaenda?
Chii chaunogona kuona muPolotsk? Kuenda kupi? Monument kuna Vseslav the Charodey.Monument to EFROSINIA POLOTSKAYA. UNOGONA KUFAMBA PAKATenderedza KUSVIRA KWEMAHARA BHINTSI Polotsk iguta muBelarus, yaimbova muzinda wehukuru hwePolovtsian, guta rine simba ...
Ndedzipi mutauro wokune imwe nyika vadzidzi veAmerica vanodzidza?
Ndeupi mutauro wekunze unodzidza vana vechikoro vekuAmerica? Vana vechikoro vekuAmerican vanodzidza mitauro yakasiyana siyana pavanodzidzisa, chiSpanish, chiGerman, chiItaly, uye vanodzidza mitauro isingawanzo, senge, semuenzaniso, chiHebheru. MuAmerica, chete ...
Inguva yakadii America owe China?
America yakawanda yakwereta China zvakadii? parizvino, maererano nezvakataurwa neInternational Chinese Radio (MCR), chikwereti chavo chenyika chinofungidzirwa pa2,55 trillion. madhora mugoridhe zvakaenzana. Panguva imwecheteyo, kunze kwechikwereti chehurumende, kune zvakare zvikwereti zvemumwe makambani ...
Rwizi rwakapa zita rematombo?
Rwizi rwakapa zita raro kune ingwe? Iwe unoreva rwizi Ussuri, nekuti kune Ussuri tiger? Kune zvekare Rwizi rweAmur uye kune maAmur tiger .. Chaizvoizvo, iyo Amur, Far Eastern, Ussuri tiger, ese aya ...
Flag of which country (and why) is not a traditional rectangular shape?
Ndeipi nyika mureza (uye nei) isiri yechinyakare rectangular chimiro? Chimiro chetsika chemureza wenyika itswere. Izvo chete zviyero zvehurefu nehurefu zvinosiyana. Zvakare, iwo akasiyana siyana ehurumende mireza ari kunyatso kuderedzwa ...
Chii chiri kuchamhembe kwenyika?
Ndeipi nzvimbo yekuchamhembe pane nyika? Cape Morris Jesup ndiyo nzvimbo yekuchamhembe kwepasi. Iye ari muGreenland. Asi mune zvimwe zvinyorwa chiwi ichi chinonzi Kaffeklubben. Iyo cape yakawanikwa nemaAmerican mu1900 ...
Mutungamiri wekare munyika yose?
Mutungamiri mukuru pasirese? Mutungamiri wekare nhasi ndiChaumont Peres - mutungamiri weIsrael, ane makore makumi mapfumbamwe ekuberekwa. Mutungamiri mukuru pasi rose ndiShimon Peres, mutungamiri weIsrael. Ndiye…
Iko sutukasi yakakura yakaonekwa paRed Square?
Ndeupi musutukesi muhombe akaonekwa paRed Square? Pachinzvimbo chemaneja weGUM, Louis Vuitton akatumira chikumbiro kuti abvise chimiro pakarepo. Chikonzero chekusagutsikana kwesangano revatengesi ndiko kusiyana pakati pehukuru hwakaziviswa neicho chaicho. Pavilion…
Ndeipi chivako chakareba kwazvo muRostov-on-Don?
Ndeipi chivakwa chakareba kwazvo muRostov-on-Don? Kana ndisina kukanganisa, ndinofunga kuti imba ino iri pakati peguta uye iri chikamu cheRostov-Guta tata. Nyowani, yechazvino, yakanaka. Iyi yakaoma inobata yakazara block ...
Ndeupi nyika yeEurope iri pedyo neRussia?
Ndeipi nyika yeEurope iri padyo nemaRussia? MaSerbia. Nyika chete yeEurope iri padyo nemaRussia mune zvese zvinhu. Uye mune hunyanzvi hwevanhu uye mukutenda uye kunyangwe nemavara. Kunyangwe pamberi pechimurenga ...
Unogara mumugwagwa kupi? Nhau yake chii?
Unogara mumugwagwa upi? Ndeipi nyaya yake? Ndinogara paChapaev Street. Mugwagwa uyu muguta rangu idiki uye hapana kana chinoshamisa pauri. Zvese zvinhu zvinogona kuverengerwa pa ...
peji 1 peji 2 ... peji 177 Next Page
Mibvunzo ye55 mu database yakagadzirwa mu 0,671 masekondi.